Wararka - Ku saabsan Baolai
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. waa shirkad baaxad weyn oo gaar loo leeyahay oo isku dhafan wax soo saarka muraayadaha, cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka, iyo soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha. Shirkaddayadu waxay leedahay saddex wershadood oo ku yaal qaybaha sare ee qoyska, 2 dukaanno oo ku yaal magaalada ganacsiga, shirkad ganacsi oo ajnabi ah, iyo meherado waaweyn oo dhinac saddexaad ah oo tafaariiqda ku yaal. 19 sano oo khibrad ah oo aan u leenahay soo saarista muraayadaha indhaha, waxaan isku dhafnay ku dhowaad boqol warshadood oo muraayado ah iyo warshado kaabayaal ah oo iskaashi saaxiibtinimo leh. Warshaddu waxay ku taalaa Linhai, Taizhou, Zhejiang, oo ah saldhiga ugu weyn ee wax soo saarka indhaha ee dalka. Bakhaarka iyo shirkadda ganacsiga ajaanibta waxay ku yaalliin xarunta ugu weyn adduunka ee loo qaybiyo badeecadaha-Yiwu, Shiinaha. Macaamiisha waaweyn ee caalamiga ah ee shirkadeenu la shaqeyso waxaa ka mid ah: Coca-Cola, Unilever, Wal-Mart, Disney, Lipton, Ford, iwm. Shirkaddu waxay u qaadataa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda hage ahaan, takhasus gaar ah u leh siyaasadda, iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah aaladaha ganacsiga shisheeye ee caanka ah kaalmada ahaan. Waxayna leedahay faa iidada qiimaha ee isbahaysiga 600 warshadood oo isla warshadda ah, oo ay weheliso waaxdayada kormeerka dokumenteriga ah, si aan u siino macaamiisha adduunka alaab tayo leh oo deggan, taasoo ku hogaamineysa warshadaha wax soo saar tayo sare leh iyo qiime macquul ah.
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa fikradda "dadka u janjeedha" waxayna ixtiraamtaa shaqsi kasta oo madaxbannaan, oo ay ku jiraan macaamiisha, shaqaalaha, la-hawlgalayaasha, alaab-qeybiyeyaasha iyo kooxaha bulshada. Iyada oo ku saleysan "daacadnimo" iyo "aaminaad" ujeeddada, waxaan ku raadjoognaa heer sare, si joogto ah ayaan u horumarineynaa uguna cusbooneysiineynaa, waxaanan si joogto ah ugu shaqeyneynaa farxad shaqsiyadeed ee shaqaalaha shirkadda iyo danaha macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaasha.
Iyada oo ku saleysan ujeedada dhismaha shirkad weyn, waxaan kalsooni ku qabnaa inaan dadweynaha u tagno 5 sano gudahood, oo aan ku adkeyno horumarka joogtada ah iyo muddada-dheer. Isla mar ahaantaana, waxaan ku tiirsan nahay ilaha aadanaha ee xoogga leh, maareynta wax soo saarka adag iyo falsafadda ganacsiga, iyada oo loo marayo isku soo aruurinta waaya-aragnimadeena iyo baadi-goobka iyo hagaajinta mustaqbalka, Waxaa ka go'an inaan hoggaamiye ka noqdo warshadaha indhaha ee Shiinaha iyo adduunka !